Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » China Travel News » Ny fidiram-bolan'ny dia sy ny fizahan-tany any Beijing dia nilatsaka 53% tamin'ny taona 2020
Ny tanànan'i Beijing dia nahita ny fijanonan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahantany tamin'ny taona 2020
Ny fidiram-bolan'i Beijing tamin'ny fizahan-tany dia nidina 50 tapitrisa dolara taorian'ny fitomboana nandritra ny taona maro
COVID-19 dia namely an'i Shina aloha ary niteraka fikorontanana goavambe tamin'ny H1 tamin'ny 2020
Ny fizahan-tany any Sina dia vinavinaina ho sitrana tanteraka ao anatin'ny 5 taona
Ny indostrian'ny fizahantany dia voa mafy tamin'ny areti-mifindra COVID-19 ary hitan'ny tanànan'ny Beijing ny fiatoan'ny indostria nijanona tamin'ny taona 2020. Beijing dia lasa toerana fizahan-tany malaza indrindra talohan'ny areti-mandringana miaraka amin'ny fidiram-bola avy amin'ny fizahan-tany miditra voarakitra $ 5.16B tamin'ny 2019 . Raha ny angon-drakitra farany farany dia nihena 53% mahery ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany any Beijing tamin'ny taona 2020 noho ny fahaverezana 330 miliara na $ 50 miliara.
Nifindra hatry ny ela tamin'ny politikany mitokana i Sina ary efa ela no namporisihany ny tanibe ho toerana fitsangantsanganan'ny mpizahatany. Ny karama avy amin'ny sehatry ny fizahantany ao Shina dia nitombo hatrany amin'ny CAGR 13.8% matanjaka hatramin'ny 2010-2019 ka hatramin'ny 5.7 trillion trosa na efa ho $ 880 miliara. Tamin'ny taona 2019, Sina no firenena fahefatra fitsidihan'ny mpizahatany vahiny izay 65.7 tapitrisa no tonga tamin'ny taona.
Beijing dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza any Sina ary nankafy ny fitomboan'ny sehatry ny fizahan-tany ny tanàna mandra-pahatongan'ny areti-mandringana tamin'ny taona 2020. Nanomboka tamin'ny 2016-2019, ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany any Beijing dia nahitana CAGR 5.53%, tafakatra hatramin'ny sandan'ny 622.7 miliara tamin'ny taona 2019. Na izany aza, ny COVID-19 dia nanidy ny sisin-tany manerantany, nanimba ny fivezivezena eran'izao tontolo izao ary nanakorontana ny fotoana natsangan'ny indostrian'ny fizahantany ao Beijing. Ny fidiram-bolan'i Beijing avy amin'ny fizahantany dia nidina mihoatra ny 53% tamin'ny taona 2020 ho lasa 291 mahery.
Beijing dia nihena fatiantoka goavana tamin'ny fidiram-bola manokana amin'ny fizahan-tany miditra izay nidinan'ny fidiram-bola avy amin'ny 5.16 miliara dolara tamin'ny 2019 lasa $ 480 tapitrisa tamin'ny 2020.
Tsapan'i Shina ny vokatry ny COVID-19 talohan'ny nahatsapan'ny ankamaroan'izao tontolo izao. Ohatra iray mazava amin'izany ny fihenan'ny famandrihana Airbnb isan-kerinandro nanomboka tamin'ny 5 Janoary ka hatramin'ny 7 Martsa raha ny Coronavirus dia vaovao tamin'ny eran'izao tontolo izao ny zava-mitranga any amin'ny faritra maro any Sina. Beijing dia niaina fihenan'ny 96% mahamenatra tamin'ny famandrihana AirBnB isan-kerinandro raha ampitahaina amin'ny 46% fotsiny tany Seoul sy 29% tao Tokyo tamin'ity vanim-potoana ity.
Ny isan'ny mpizahatany ao an-toerana dia tombanana ho nidina hatramin'ny 62% tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2020 raha oharina tamin'ny taona talohan'io ary ny fidiram-bola dia nahatratra hatramin'ny 77%. Tamin'ny faran'ny taona dia niaina fidinan'ny mpizahatany an-trano 43% i China ary 52% ny fidinan'ny fidiram-bola avy amin'ny fizahantany anatiny.
Tamin'ny taona 2019, ny fandraisana anjara ara-toekarena tanteraka amin'ny fizahan-tany any Shina dia tombanana ho $ 1.67 trillion. Ity dia nianjera tamin'ny $ 745.5 miliara monja tamin'ny taona 2020 - fihenan'ny 55% mahery nefa mbola ny lehibe indrindra any Azia ary ny faharoa lehibe indrindra aorian'ny USA.
Na izany aza, ny vinavina dia nisondrotra niverina mihoatra ny 40.5% tamin'ny 2021 ka hatramin'ny $ 1.04 trillion. Ity tarehimarika ity dia vinavinaina hihoatra ny ambaratonga alohan'ny aretina pandamia voalohany tamin'ny 2023 raha vinavinaina ho 1.75 trillion dolara ny fandraisana anjara ara-toekarena tanteraka amin'ny fizahan-tany.